Taliyihii guud ee ciidamada Itoobiya oo ku dhintay Afgembi fashilmay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Taliyihii guud ee ciidamada Itoobiya oo ku dhintay Afgembi fashilmay.
Last updated Jun 23, 2019 539 0
Saraakiil iyo ciidamo katirsan milliteriga wadanka Itoobiya ayaa ku dhaqaaqay fal afgembi ah oo ay damacsanaayeen iney kula wareegaan talada gobolka Bahirdar ee Itoobiya.
Falkan Afgembiga ah oo ay ka qeybgaleen boqollaal askari oo Itoobiyaan ah ayaa lagu dooonayay in gebi ahanaba lagula wareego is maamulka Amxaarada ee Bahirdar, balse waxaa ka hortagay ciidamo kale oo daacad u ahaa madaxweynaha is maamulkaas.
Dagaal faraha looga gubtay ayaa ka dhacay magaalada, gaar ahaan xarunta maamulka, ugu dambeynna waxaa sidaas lagu baajiyay afgembi dhici lahaa.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo kalimad ka jeediyay tvga wadanka ayaa shaaca ka qaaday in afgembiga uu fashilmay, islamarkaana uu ka xunyahay dadkii halkaas ku dhintay oo ay ku jiraan saraakiil sar sare.
Dadka ku dhintay dagaallada ka dhacay Bahirdar oo ah xarunta gobolka Axmaarada waxaa kamid ah taliyihii guud ee ciidamada Itoobiya General Seare Mekonnen, sida uu xaqiijiyay ra’iisul wasaaraha Itoobiya.
Dowladda Itoobiya waxay sheegtay inuu fashilmay afgembiga, oo lagu eedayay inuu ku dambeeyo sarkaal katirsan milliteriga oo dhawaan laga sii daayay xabsiga.
Wadanka Itoobiya ayaa u muuqda mid sii kala furfurmaya, qowmiyad welibana waxay dooneysaa iney ka madax banaanato dalka intiisa kale, waana wadan aad u weyn, dadka ku noolna ay gaarayaan 100 milyan oo u badan qowmiyado muslimiin ah oo la gumeysto.